Zavatra tokony ho fantatra hanombohana amin'ny fanaovana doka amin'ny mpijery voatahiry ao amin'ny Facebook | Martech Zone
Zavatra tokony ho fantatra hanombohana amin'ny fanaovana kopia mpihaino voavonjy ao amin'ny Facebook
Zoma, Oktobra 18, 2019 Zoma, Oktobra 18, 2019 Rae Steinbach
Misy tranga rehefa te-hikendry mpihaino vaovao tanteraka ianao amin'ny ezaka marketing amin'ny Facebook anao. Na izany aza, tsy fahita firy ny ankamaroan'ny mpihaino anao hifindra amin'ny fomba lehibe.
Ohatra, angamba ianao dia namorona mpihaino manokana miaraka amin'ny tombontsoa lehibe sy ny endri-tsoratra demografika. Miaraka amin'ity mpijery ity dia angamba faritra iray no kendrenao. Ny fahafahanao mamerina io mpihaino voavonjy io dia mety hanampy be raha toa ka mandefa vaovao ianao fanentanana ara-barotra ary te hikendry ny karazan'ireo mpampiasa azy ihany, fa amin'ny faritra hafa amin'ny firenena, na faritra kely kokoa.
Miaraka amin'ny mpihaino manao dika mitovy, ny hany tokony hataonao dia ny manova faritra, fa tsy mamorona tanana mpihaino vaovao miaraka amina toerana mitovy aminy afa-tsy io iray io. Ireo toe-javatra hafa rehetra azonao avela fotsiny.
Tsy manolotra fampiasa amin'ny alàlan'ny fanaovana kopia ireo mpihaino voavonjy ny Facebook Izany dia nilaza fa afaka manao izany hatrany ianao amin'ny fanarahana ireto dingana lehibe ireto:
mampiasa Facebook Business Manager (na Ads Manager raha tsy manana kaonty Business Manager) dia safidio ny kaonty doka mifandraika dia safidio mpijery eo ambany -pananana fizarana hahitana ny mpihaino anao voavonjy. Zahao ilay boaty eo akaikin'ny anaran'ny mpanatrika tianao averina.
Fandikana ny mpihaino
Farany, tsindrio ny anglisy bokotra. Io dia ahafahanao manitsy ny mpihaino. Averina indray fa ho hita fa mahasoa izany rehefa te hanova mpihaino duplicate ianao nefa tsy ampidirinao tanana indray amin'ny tanana ireo fampahalalana mitovy.
Te hanome anarana vaovao ho an'ny mpihaino anao ianao hisorohana ny fikorontanana. Mety ho tsotra toy ny Dika mitovy amin'ny [Anaran'ny Mpihaino Tany An-tany]. Amboary araka izany ny anarana.
Azonao atao koa ny manamboatra fanovana amin'ireo toe-javatra hafa tianao ovaina. Angamba ianao te-kendrena sokajin-taona hafa amin'ny fampielezanao vaovao. Angamba miralenta karazana iray ihany ianao. Ny fanovana nataonao dia miankina amin'ny tanjonao manokana. Vantany vao afa-po amin'ny fanovana nataonao ianao, ny tsindrio "Save as New" fotsiny sisa no hataonao.
Hamarino tsara fa tsy manindry ianao Update! Tsy hamorona mpihaino vaovao izany. Raha tokony ho izy dia hampihatra ireo fanovana fotsiny amin'ilay efa misy. Tsy tianao hitranga izany.
Tsara ihany koa ny manamarika fa misy toe-javatra mety misy dikany mba hisorohana ny fifandimbiasan'ny mpihaino. Mamela anao ny Facebook jereo ny misimisy, manampy anao hahatakatra tsara kokoa izay azonao atao mba hiarovana azy ireo. Na izany aza, rehefa mila diplaoma mifanindry eo anelanelan'ny mpihaino anao ianao, ity dingana tsotra ity dia mety hanampy be.
Rae dia nahazo diplaoma avy amin'ny Tufts University miaraka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny diplaoman'ny sinoa. Rehefa avy nandany fotoana nipetrahana sy niasa tany ivelany tany Sina izy dia niverina tany NYC hanohy ny asany ary hanohy hitandrina ny atiny kalitao. Rae dia liana amin'ny fitsangatsanganana, sakafo, ary fanoratana (mazava ho azy).
Mahazo sitraka bebe kokoa amin'ny doka Instagram: Fomba fanao 8 tsara harahina